Sida loo isticmaalo heesaha heesaha ee Apple Music-ka leh iOS 10 | Waxaan ka socdaa mac
Imaatinka macruufka 10, codsiga Muusikada iyo, si gaar ah, adeegga muusikada qulqulka Apple Music waxay heshay dib u naqshadeyn dhammaystiran oo ah isku xirkeeda oo kujirta shaqooyin cusub oo xiiso leh iyo astaamaha. Hawlaha cusub ee ugu caansan waa awoodda lagu daawado ereyada heesaha aan dhegeysaneyno.
Shaqadan cusubi waa mid aad waxtar u leh in la raaco heesaha aan jecel nahay dabcanna u heesno, xitaa haddii aanaan u samayn sidii farshaxamiistaha su'aasha laga qabo (xaalado badan, waan ka sii fiicnaan doonnaa 😂). Si kastaba ha noqotee, in kasta oo ay waxtar leedahay, waa suurtagal in helitaanka ereyada heesaha ee ku jira Apple Music cusub waxay noqon kartaa hawl xoogaa adag. Sababtaas awgeed maanta waxaan kuu sheegaynaa sida loo arko ereyada heesaha aad ugu jeceshahay.
1 Apple Music, oo hadda leh heesaha heesaha
1.1 Habka marka hore
1.2 Habka labaad
Apple Music, oo hadda leh heesaha heesaha
Markii la bilaabay nidaamka cusub ee hawlgalka mobilada 10, Apple ayaa dib loo habeeyay Apple Music. Ujeeddada ugu weyni waxay ahayd in la aamusiyo dhaleeceynta lagu eedeeyay adeegga in ay leedahay xiriir aan macno lahayn oo adkeeyay helitaanka hawlo badan oo ka mid ah ama helitaanka muusikada cusub Waa run in shirkaddu ku guulaysatay, laakiin qayb uun bay ahayd.
Iyadoo aan loo eegin haddii naqshadeynta cusubi ay ka badan tahay ama ka yar tahay annaga oo jecel, muuqaalka cusub ee kuu ogolaanaya inaad daawato ereyada heesaha ayaan si sax ah ugu istaagin marin u helitaankiisa, inkasta oo haa tahay waxtarkeeda.
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno, sida muuqata sida ay noqon karto, waa inaan bilowno ciyaarida hees. Marka heesta ay ka ciyaarayso iPhone-keena ama iPad-ka, guji calamada heesaha, oo ka koreysa baarka menu-ka Apple Music ee shaashadda hoose, si loo furo kaarka heesta shaqsiga. Laga bilaabo xilligan, waxaa jira laba qaab oo kuu oggolaan doona inaad aragto ereyada heesta.
Habka marka hore
Guji calaamadda lagu aqoonsaday "saddex dhibic" ee geeska midig ee hoose ee shaashadda. Tallaabadani waxay kuu geyneysaa menu dhammeystiran oo leh ficilo kala duwan oo aad ku fulin karto heesta aad dhageysaneyso (soo dejiso, ku dar liiska liiska, la wadaag, ka tirtir maktabaddaada, iwm.).
Xullo xulashada «Waraaqaha». Waa ikhtiyaarka ugu dambeeya, ee ka hooseeya «Share song». Laakiin xusuusnow, maahan in dhammaan heesaha lagu bixiyo Apple Music wali ay leeyihiin heesahooda kala duwan oo la heli karo sidaa awgeedna, doorashadan waxaa la soo bandhigi doonaa oo keliya marka la heli karo ereyada heesta aad dhageysaneyso.
Erayada heesta ayaa markaa lagu soo bandhigi doonaa daaqad cusub oo translucent ah oo lagu daboolay dusha sare ee daaqada heesta. Markaad rabto inaad joojiso aragtida ereyada, ku dhufo "Done" ama "OK" midigta kore ee shaashadda.
Shakhsi ahaan, xulashadan labaad ee ah inaan u fiirsano ereyada heesaha aan ugu jecel nahay Apple Music waa mid dareen badan, raaxo leh oo dhakhso leh. Aan aragno haddii aad u malaynayso isku mid:
Kaadhka shakhsiga ah ee heesta ay dhegeysanayaan ka mari, shaashadda xagga hoose ee shaashadda.
Si otomatig ah, muuqaalka aan ka hadlayno wuxuu ka muuqan doonaa xagga hoose.
Dhagsii «Show» oo ereyada heesta ayaa loo soo bandhigi doonaa si la mid ah sidii aan ku aragnay qaabkii hore, daaqad cusub oo tarjumid ah oo dulmaray daaqadda heesta lafteeda. Markaad rabto inaad joojiso aragtida ereyada, si fudud ugu dhufo "Done" ama "OK" midigta kore ee shaashadda waxaadna ku laaban doontaa kaarka heesta
Sidii aan horey u soo tilmaannay horay, hadda, muuqaalka heesta cusub heesta wali lama heli karo dhamaan heesaha iyo albumyada ay bixiyaan Apple Music. Tan iyo markii adeegga lagu dhawaaqay shirkii ugu dambeeyay ee Horumarinta Adduunka, Apple ayaa sii wadaysa inay shaqeyso iyo inta lagu jiro marxaladda tijaabada beta tirada heesaha heesaha ayaa si weyn u koray, waxayna sii wadi doonaan inay sidaas ku sameeyaan xawaare wanaagsan. Markaa hadaadan heli karin midka aad rabto, ha quusan, dhawaan ayaa la heli doonaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Sida loo isticmaalo heesaha heesaha ee Apple Music oo leh iOS 10
Aniguna waxaan idhi, iyada oo aan loo eegin haysashada ama haysashada muusikada tufaaxa, sidee baan u arkaa ereyada heesahayga oo la geliyay iphone-kayga iyo in aan ku dhejiyay itunes-ka mid mid macluumaadka iyo qoraalka. Mise ereyada ayaa u hadhay kuwa bixiya  muusiga?
Jimmy. Adeegga heesaha heesaha, sida oo kale, waa qayb ka mid ah rukunka Apple Music. Aragti ahaan (iskuma dayin maxaa yeelay kuma dhejiyo ereyada sidaada oo kale ah ee loo maro iTunes) waa inaad awood u yeelataa inaad ku aragto ereyadaas heesaha ku jira maktabaddaada aad u dirtay iPhone-ka iTunes. Haddii kale, waxay noqon laheyd pu great weyn. hawsha, inkasta oo ayan waxba iga yaabin. Haddii aad sameyso baaritaanka oo aad noo sheegto, aad ayaan u mahadcelin doonaa.
Hagaag, waxa la igu yidhi kuma soo baxo xitaa heesahayga gaarka ah iyo inaan u haysto sidii had iyo jeer waligoodna way iiga shaqeyn jireen iphonekeyga dhamaan noocyada macruufka. Haatan wax cusub ayey ku dhejiyeen iTunes-ka qeybta ereyada, aan kuu sharaxo, waxaad gujisaa hees, waxaad ka heleysaa macluumaad, ereyada tabeeda iyo ikhtiyaar ayaa soo baxaya oo lagu calaamadeynayo "ereyo shaqsiyeed", halkaas oo aan ka helo ereyada aan anigu Gacanta ayaad ku soo gashay, Haddii aad calaamadeyso sanduuqa "ereyada shaqsiyeed", digniin ayaa u muuqata oo leh "ereyada lama heli karo, ma jiraan ereyo heestan", markaad sanduuqa mar kale hubiso, ereyadaada shaqsi ahaaneed ayaa soo muuqda, sidaa darteed anigu ma Waxba fahmi maayo. Kama helo taleefankayga iphone sinaba.
IPhone 7 madow oo dhalaalaya maahan tan ugu badan ee lagula taliyo